Sarony → Akanjo miasa • amboradara solosaina P&M matihanina
Overalls Ampiasaina amin'ny indostria maro izy ireo, ny fahasamihafan'izy ireo dia mahatonga azy ireo ho mendrika amin'ny toerana maro, na aiza na aiza no anoroana ireo tebiteby sy plastika.
Ny palitao dia azo ampiasaina hifanakalo sweatshirts i pataloha. Misaotra azy io, azonao atao ny miaro ny vatan'ny vatana manontolo sy ny fitafianao manokana amin'ny zavatra simika sy loto.
Ho an'ny fanamorana sy fampiononana, mpanamboatra maro no mampiasa vahaolana fanampiny, toy ny singa manohana ny akanjo eny am-pelatanana, hisorohana azy tsy ho solafaka.
Manolotra anao izahay amin'ny tolotray akanjo ivelany voaroaka, ary koa kinova fahavaratra ary akanjo fiarovana manokana.
Ny kalitaon'ny fitaovana avo lenta dia manome antoka ny faharetan'ny akanjo lava, fa koa ny fivezivezin'ny rivotra ampy, izay manakana ny hatsembohana be loatra.
Antony lehibe fitoriana atao dia ny hiarovana ny fitafiana amin'ny fahasimbana na ny tasy, fa ny tanjon'ny fitafiana miaro kosa miaro amin'ny akora simika na ny afo.
Izahay dia mpizara fizarana lamba 3M, Dupont, Leber & Hollman, Reis ary Resin. Ny sasany napetraka dia nanankarena am-paosy teo amin'ny lohalika izay mamela ny fametrahana takelaka lohalika ho an'ny asa lava mandritra ny mandohalika. Ny lambam-pandriana dia vita amin'ny fefy nohamafisina amin'ny faritra saro-pady indrindra.
Noho ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana miasa dia manolotra izahay akanjo ivelanyizay vita tamin'ny fitaovana be rivotra izay mamela ny fahalalahana mihetsika, mametra ny hatsembohana mafy mandritra ny asa ara-batana. Ny akanjo toy izany dia mety tsara amin'ny fiasana amin'ny atrikasa fiara, fitters, plumber ary ny hafa - na aiza na aiza dia ahiana ho voan'ny loto amin'ny zavatra sarotra hosasana.
Ao amin'ny sehatry ny akanjo fahavaratra, misy ihany koa ny kinova tsy misy vovoka, afaka fenoina izy ireo saron-tava na miaraka amin'ny aroloha. Ny fonosana fiarovana dia vita amin'ny lamba avo lenta izay miantoka ny fampiasana maharitra. Ho an'ny kalitao tsara kokoa, ny maodely sasany dia nanamafy ny zaitra mba hiarovana amin'ny triatra sy ny fery. Manana modely amin'ny paosin-telefaona nozairina ihany koa izahay.
Ririnina akanjo ivelany
Overalls asa ririnina dia safidy iray hafa amin'ny akanjo fiasa mahazatra misy pataloha sy volon'ondry. Ny tombony azon'izy ireo dia ilay kinova miaro amin'ny loto eo anelanelan'ny sosona tsirairay. Noho ny fampiasana fifangaroana fitaovana mety dia tsy matevina loatra izy io, ary mamela ny fahalalahana mihetsika izany. Ny akanjo ririnina natolotray dia nataon'ny orinasa Reis.
Ny jumpsuit vita amin'ny insulated dia vita amin'ny landihazo miaraka amina polyester, izay misy koa ny firakofana. Ny lamosina dia noharian-karena tamina fingotra manokana ho an'ny fahalalahana mihetsika tsara kokoa. Ireo maodely ireo dia mety indrindra amin'ny mpamatsy lasitra, mpanamboatra lalana, fitters ary mpiasa amin'ny fananganana. Ny akanjo ivelany dia misy paosy izay ahafahanao mitahiry telefaona na entana madinidinika. Ny tady amin'ny valahana sy ny tanany dia manakana ny fisintomana rehefa mihetsika. Ny maodely sasany koa dia manana paosy ho an'ny pads mba hampihenana ny tsindry rehefa miasa amin'ny lohalika.
Sarona fonosana tsy misy tenona sy sentetika
Ny akanjo fiarovana manokana avy amin'ny orinasa toa ny 3M na Dupont dia natao hiarovana amin'ny zava-dratsy. Ireo akanjo natolotra dia natokana ho an'ny, ankoatry ny hafa. mpanao hosodoko, mpihaza ary koa ny olona miatrika akora simika mahery. Ho fanampin'izany, ho an'ny fiarovana, ny akanjo voafantina dia misy amin'ny loko fampitandremana. Natao ho an'ny olona miasa amin'ny habakabaka, na toetr'andro sarotra na amin'ny alina izy ireo.
Ny akanjo fiarovana manokana dia mahafeno ny fenitra takiana apetraky ny Vondrona eropeana amin'ny akanjo fiarovana. Ny akanjo natokana ho an'ny toe-javatra sarotra dia miaro amin'ny akora simika, fitaovana radioaktifa, vovoka ary sombina radioaktif. Ny fitaovana fanampiny misy zipera dia manamora ny fametrahana ny akanjo.
Allegro miasa amin'ny akanjo ivelanyakanjo ankapobeny an'ny vehivavyakanjo ankapobenyakanjo ankapobeny an'ny lehilahyakanjo ivelany misy oranaakanjo ivelanymiasa over AllegroOveralls amin'ny asa Audiakanjo ankapobeny an'ny vehivavyGdynia akanjo ivelanyakanjo ankapobenyMiasa ivelany ny asa Krakowakanjo ankapobeny an'ny lehilahyakanjo vita amin'ny insulatedSarona fonosin'ny asa OLXmpanamboatra akanjo ivelanypalitao asa weldingoveralls efa niasamiasa manontolo Warsawakanjo ivelany misy pirintyfahita amin'ny asa ririninaakanjo fiarovanatenim-pirenena hafafonosan'ny asa moralamba ho an'ny lamba firakotraakanjo ivelany akanjooveralls asa efa niasa
5 / 5 ( 12 vato )